Guji - Xeerarka
Guji waa ciyaar is-dhexgal ah oo isku dhafan labadaba isdhexgalka ciyaaraha ficilka iyo awoodda maskaxda ee nasashada badan, ma jiro cayaar waqti cadaadis ah. Hadda ka dibna, tiro ayaa soo muuqan doona muddo gaaban, kadibna way baabi'i doontaa. Ujeedada cayaarta ayaa ah in la gujiyo dhammaan tirooyinka ay yihiin god oo kaamil ah (sida 121, taas oo ah 11 * 11), iyo in la iska indha tiriyo kuwa kale.
Tirooyinka muuqan doona waa in kala duwan ee 0.. 200, sidaas darteed waxaa jira balli kooban oo god oo kaamil ah in aad leedahay si ay u aqoonsadaan. Si kastaba ha ahaatee, waqtiga loo qoondeeyey qiimaynta ka dibna guji/iska indha tirada waa xadidan. Waxaa laguu oggol yahay inaad sameyso 5 qalad. Dhibcaha ugu dambeeya waa tirinta tirooyinka aad qaadatay tallaabada saxda ah.